Portenta H7: ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba an'ity sehatra ity | Fitaovana maimaim-poana
Tao amin'ny Consumer Electronics Show any Las Vegas dia nisy fampisehoana teknolojia lehibe natolotra. Arduino koa dia nanararaotra naneho ny sasany tamin'ireo fitaovam-piadiana miafina izay haparitany. Ary tsy lasa tsy voamariky ny finday smartphone, fahitalavitra marani-tsaina, fiara elektrika ary fitaovana mandeha ho azy ao an-trano IoT. Nantsoina ny zava-baovao Hery H7 ary io no ivon'ny saina ho an'ireo tia ny sehatra fampandrosoana malaza.
Marina fa i Arduino dia nifantoka hatreto tsena fanabeazana sy ho an'ny mpanamboatra na mpifankatia DIY. Na ny takelaka misy ny marika Pro aza dia azo ampiasaina ao amin'ity tontolon'ny mpanjifa ity ho an'ny tetikasa sasany. Na dia marina aza fa misy tetikasa matihanina sasany izay nampiasa ny Arduino ho toy ny fototra ...
Saingy ankehitriny dia lasa lavitra lavitra niaraka tamin'ny Portenta H7 izy ireo ary namolavola azy indrindra indrindra miaraka amina matihanina. Ireo olona na orinasa te hampivelatra haingana ireo tetikasan'ny fitaovana fampiharana indostrialy.
1 Inona ny Portenta H7?
1.1 Cores 2 mifanitsy
1.2 Mpanafaingana sary
1.5 Antsipiriany momba ny fitaovana bebe kokoa
1.6 Datasheets sy antontan-taratasy fanampiny
Inona ny Portenta H7?
Na dia vidiny mety somary lafo aza ho an'ny mpanamboatra sy ny sehatry ny fanabeazana ireo dia tsy esorina amin'ny fampiasana azy ireo. Inona koa, misy hafa tabilao fampandrosoana ary SBC izay manana vidiny mitovy na avo kokoa aza.
Eny, ny toetra avy any Portenta H7 dia ataovy lavitra lavitra amin'ny Arduinos nentim-paharazana ity tabilao ity. Ary ny sehatra ampanaovina azy no mitaky izany, satria tsy ho ampy ny sombintsombiny MCU 8-bit, ary tsy misy fetran'ny birao hafa ao amin'ny fianakaviana. Ilaina ny fifehezana mikraoba mahery vaika kokoa amin'ny indostria.
Lafin-javatra iray hafa izay mahaliana azy indrindra ny tsy vitan'ny fandaharana amin'ny fiteny avo lenta toy ireo voalaza etsy ambony sy ny asa tena izy ireo, fa manohana ihany koa AI (intelligence artifisialy) miaraka amin'ny TensorFlow, raha mitazona ny fahaizan'ny latency ambany noho ny fitaovana maoderina. Ohatra, azo atao ny mihazakazaka kaody natambatra ho an'ny Arduino miaraka amin'ny MicroPython ary mitazona ny voany hifampiresaka.
Mampiasà endrika Portenta Carrier Board hanovana ny H7 ho a eNUC, izany hoe minicomputer matanjaka izay afaka manao ny zavatra rehetra ataonao ankehitriny amin'ny Arduino sy bebe kokoa, toy ny fampiasana algorithma fahitana solosaina ho an'ny rafitra sidina mandeha ho azy, ary mitazona fifehezana ambany moto, familiana, sns.
Raha fintinina, lovia natao manokana ho an'ny indostria na ho fitaovana laboratoara, ny fahaizana mampiasa fahitana amin'ny solosaina, PLCs, interface an'ny mpampiasa vonona ny indostria, fanaraha-maso robot, fitaovana fampiharana manakiana, hafainganam-pandeha avo lenta (ms).
Cores 2 mifanitsy
Ny fikirakirana afovoan'ny Potenta H7 dia singa roa Sary STM32H747 avy amin'ny STMicroelectronics. Chiples famolavolana frantsay sy fianakaviana STM-32 izay vondrona micro-Controllers bitika ARM miorina 32 ao anatin'ny maty. Amin'ity tranga ity, ny cores fanodinana voafantina dia ny Cortex M7 mandeha amin'ny 480Mhz ary ny Cortex M4 mandeha amin'ny 240Mhz.
Ireto misy atiny roa dia mpanao gazety amin'ny alàlan'ny mekanisma antsoina hoe Remote Procedure Call izay mamela ny fiasan'ny seamless miantso amin'ny processeur hafa. Samy nizara ny peripheraly ireo mpikirakira ary afaka mihazakazaka:
Sary Arduino IDE toy ny hataon'ny birao Arduino iray hafa. Hanao izany amin'ny ARM Mbed OS. Ity dia rafitra fiasa miasa ho an'ity sehatra ity izay ampiasaina amin'ny fitaovana IoT miaraka amin'ny Cortex-M.
Afaka mihazakazaka koa ianao fampiharana natiora ho an'i Mbed.
Iray amin'ireo fiasa hafa tafiditra ao amin'ny Portenta H7, ary iray amin'ireo tena mahagaga ihany koa, ny fahafaha-manao ampifandraiso amin'ny tabilao ivelany ny tabilao, toy ny hoe solosaina io. Amin'izany fomba izany, ahafahanao mamorona solosaina natokana natokana ho azy miaraka amin'ny mpikirakira azy manokana.
Ary mba azo atao izany a Chip amin'ny GPU ao anatin'ny STM32H747. Amin'ity tranga ity, Chrom-ART Accelertor izy io, miaraka amin'ireo encoder sy decoder ho an'ny JPEG.
Izy io dia manana pin maro be azonao ampiasaina amin'ny programa sy ampiasaina amin'ny tetikasanao. Portenta H7 dia manana 80 pine fifandraisana avo lenta amin'ny solaitrabe. Izy io dia manome ny fisoratam-bidy tsara sy manovaova be eo amin'ny rindrambaiko sy ny fanavaozana mety ilainao. Izy ireo dia hifanaraka amin'ny maro amin'ireo singa elektronika hita ato amin'ity bilaogy ity sy ny maro hafa.
Ny motherboard Portenta H7 dia misy koa ny fifandraisana WiFi sy Bluetooth, hahafahana mampifandray azy amin'ny tambajotra hifaneraserana amin'ireo singa hafa. Noho izany dia tsy mila modules fanampiny toy ny tabilao Arduino hafa. Mazava ho azy, izy io koa dia manohana ireo interface hafa toa ny UART, SPI, Ethernet, I2C, ny fifandraisana marobe amin'ny alàlan'ny USB-C (Display Port ho an'ny monitor, fandefasana herinaratra ho an'ny fitaovana OTG, ...), sns.
Antsipiriany momba ny fitaovana bebe kokoa
Portenta H7 (fantatra amin'ny anarana kaody H7-15EUNWAD) miaraka amin'ireto manaraka ireto:
Fahatsiarovana tselatra 16MB NOR
NXP SE050C2 Crypto puce, ho fiarovana
Murata 1DX Module ho an'ny WiFi / Bluetooth
Connector DisplayPort amin'ny USB-C
Famatsiana herinaratra miaraka amin'ny PSV 5V (miasa amin'ny 3.3v)
Fanohanana ny batterie Li-Po Single Cell, 3.7V, 700mAh farafahakeliny
Ny mari-pana miasa eo anelanelan'ny -40 sy 85ºC
Loha MKR ho an'ny ampinga indostrialy
Fandraisana an-tsary 8-bit hatramin'ny 80 Mhz
ADC / DAC mifangaro
Fanjifana herinaratra amin'ny maodely 2.95 μA (Backup SRAM OFF, RTC / LSE ON)
Datasheets sy antontan-taratasy fanampiny
Raha mila antsipiriany bebe kokoa momba ny Portenta H7 sy ny singa ao aminy ianao dia azonao atao ny misintona ireo antontan-taratasy na datasheets nandray anjara:
Sombiny fototra STM32H7
Modely ho an'ny fifandraisana Murata 1DX
Skema skatista Portenta H7
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Arduino » Portenta H7: izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity sehatra ity
CTC 101: izay rehetra tokony ho fantatrao momba ity programa ity